ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အစောပိုင်းလူကြီးဘဝတွင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းကိုလျှော့ချသလား။ အမေရိကန်လူမျိုးလူငယ်များအဖွဲ့၏လေ့လာမှုမှရရှိသောတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်တွင်ပေါက်နေခြင်း
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအစောပိုင်းလူကြီးစဉ်အတွင်းအိမ်ထောင်ရေး Entry Reduce ပါသလား? Young ကအမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦး Panel ကိုလေ့လာမှု (2018) မှတွေ့ရှိချက်များကို
ပယ်ရီ, Samuel L. နှင့် Kyle C. အရှည်ဆုံး။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အစောပိုင်းလူကြီးဘဝတွင်အိမ်ထောင်ရေး ၀ င်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးပါသလား။ အမေရိကန်လူငယ်များအဖွဲ့၏လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ။ ”
မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏အရေအတွက်ကိုပြီးသားလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်အမေရိကန်များအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရလဒ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု, ဒီအသင်းအဖွဲ့ကျားနှင့်ဘာသာရေးနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တည်းဖြတ်နေသည်ရှိမရှိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစောပိုင်းလူကြီးနှင့် (1) ကာလအတွင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့ဝင်ပေါက်နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါရှိမရှိ (2) ဆန်းစစ်နေဖြင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဦးတည်ချက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမှပြင်းထန်စွာဆကျနှယျအဓိကအချက်နှစ်ချက်မှာကဒီသုတေသနကြာ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့အစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ longitudinal data တွေကိုအစောပိုင်းလူကြီး (N ကို = 1) သို့၎င်းတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေလှိုင်းတံပိုး 3,4နှင့်လူငယ်နှင့်ဘာသာရေးအမျိုးသားလေ့လာမှု 1,691, အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံး-ကိုယ်စားလှယ် panel ကိုလေ့လာမှုကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာအစောပိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုလှိုင်းတံပိုးမှာမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလိင်တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား devaluing ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါတိုးတက်သောသဘောထားတွေကလှုံ့ဆော်ပေးစေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးယောက်ျားအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွညျ့စုံ၏ "လူမှုရေးအရတရားဝင်" နည်းလမ်းအဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား disincentivize စေခြင်းငှါဆိုခဲ့ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား entry ကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့မိန်းမတကာတို့ထက်ယောက်ျားနဲ့ Non-တည်ရှိဘို့ Non-linear ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတို့တွင်အဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုလက်ထပ်ထိမ်းမြား entry ကိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက် Non-ကြည့်ရှုခြင်းမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သို့သော်, ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်မြင့်လူတို့သညျအဘို့နောက်ဆုံးစစ်တမ်းလှိုင်းများကလက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အသင်းအဖွဲ့များကျားမဖြစ်စေဘို့စျယာနျဘာသာတရားကိုအားဖြင့်တည်းဖြတ်မခံခဲ့ရပါ။ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဒေတာန့်အသတ်နှင့်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်, အမျိုးသမီးများကသာ 10% ယောက်ျား၏ 40% ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ဤအဆင့်မြင့်အစီရင်ခံနှင့်အတူကြည့်ရှုမွငျ့မားညစ်ညမ်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအလယ်အလတ်အမြင်တွင်ကျား, မများကခြားနားချက် 22 အမျိုးသမီးများ၏% နှင့်တစ်နှစ်အတွက် 27 နှင့် 1 အစီအစဉ်များအကြားကြည့်ရှုယောက်ျား၏ 3% နှင့်အတူနီးပါးအဖြစ်အံ့သြဖွယ်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးများ၏တစ်ဦးကအများကြီးပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းယောက်ျား (68%) ထက်ညစ်ညမ်းရှောင် (33%) ရှိကြ၏။ ကျား, မများကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကွာခြားချက်အမြိုးသမီးမြားမှာအားလုံးမကြည့်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်း, ယောက်ျားတစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, အစွန်းမှာဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။